Nhau - Imbwa dzekurara nzvimbo
Wese muridzi wechipfuwo anoda kuziva zvakawanda pamusoro pembwa dzavo, nezve imbwa yavo inofarira nzvimbo yekurara. Idzo imbwa dzinovata mukati, uye iyo nguva yavanoshandisa kurara inogona kuratidza zvakawanda nezve manzwiro avanonzwa.
Heano mamwe maitiro akajairwa ekurara uye zvavanogona kureva.
Kana iwe uchiwanzo kuona imbwa yako ichirara munzvimbo ino yekurara. Izvi zvinoreva kuti vanonzwa kugadzikana uye kuchengetedzeka munzvimbo yavo. Idzo imbwa kazhinji dzinofara, dzisina hanya, uye dzakavimbika kwazvo. Ichi chinzvimbo chinosiyawo mitezo yavo yakasununguka kufamba panguva yekurara, saka iwe unogona kuona kumwe kurira uye gumbo kurova kubva imbwa yakarara nedivi ravo.
Iyi nzvimbo yekurara inowanzo kuve yakajairika.Kazhinji mumwedzi yekudonha uye yechando kana mamiriro ekunze ari kutonhorera, imbwa dzakarara nenzira iyi, kubatsira kuchengetedza kudziya.
Yakatambanudzwa Kunze Kwechikadzi
Imbwa dzinorara munzvimbo iyi, nemaoko nemakumbo dzakatambanudzwa uye dumbu rakadzika, kazhinji chiratidzo chehunhu hunhu, vanogara vakaguta nesimba, zviri nyore kukurudzira, uye vanofara.Iyi nzvimbo yekurara yakajairika muvana. Icho chinzvimbo chesarudzo chevacheche vanorara panguva yekutamba uye vanongoda kudzika pasi pavakamira.
Kumashure, Inoturika Kumusoro Mumhepo
Kurara nedumbu rakafumurwa kunobatsira imbwa kutonhorera sekukomberedza bhora kunogona kuchengetedza kupisa. Kufumura idzi nzvimbo inzira yakanaka yekurova kupisa nekuti iyo furha yakatetepa yakatenderedza dumbu uye mapaja anobata ziya gland.
Ichowo chinzvimbo chinoratidza imbwa inonyatso gadzikana, ichisiya nzvimbo dzadzo dzakaomarara uye zviri nyore kumhanya nekukurumidza netsoka.Iye mwana angangove asina hanya munyika achaita munzvimbo iyi. Iyi nzvimbo yekurara yakajairika mumwedzi yezhizha.
Kune imbwa idzo dzinofarira kurara nevaridzi vadzo, zvinogara zvakachengeteka kuchenesa, muzinga, kugeza uye kubayiwa jekiseni.